We Fight We Win. -- " More than Media ": ကား နံပတ် ကို မြန်မာ လို ရေး နေသမျှ အပြောင်းလဲလုပ်လို့ မရ နိင်ပါ
ကား နံပတ် ကို မြန်မာ လို ရေး နေသမျှ အပြောင်းလဲလုပ်လို့ မရ နိင်ပါ
(ခေတ် နောက်ပြန် ဆွဲ နေတဲ့ မြန်မာ ကားနံပတ်ပြား ၊ ၂၀၁၄ အာဆီယံ အစည်းဝေးတို့၊ ဆီးဂိန်း တို့ မှာ အားကစားသမား တွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်မဲ့သူတွေ ရွာလည် မဲ့သဘောပေါ့ )
(ဂျပန် နိင်ငံကားနံပတ်ပြား )
( အိနယ ကား နံပတ်)
( တရုပ်ပြည်က ကားနံပတ်)
( မလေးရှား က ကားနံပတ်)
( လားအိုစ် က မော်တော်ဆိုင်ကယ်နံပတ်)
( ဗီယက်နမ်က ကား နံပတ် ပြား )
သမတ ဦးသိန်းစိန် က အပြောင်းလဲ လုပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သမတ ကြီးကို ရင်းနှီးစွာအကြံပေးလိုတယ်။ မော်တော်ကား နံပတ် ကို ဗမာလို ရေးထားသမျှ အပြောင်းလဲ လုပ်လို့ မရပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးရပါမယ်။ မော်တော်ကား နံပတ်ကို တိုးတက်လာတဲ့နိင်ငံတိုင်းက အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းလို၊ ဂျပန်လုို မရေးကြတော့ပါ။ မြန်မာ့ အမျိုးသားရေးယျဉ်ကျေးမှုနေရာတိုင်းမကောင်းပါ။ ခေတ်မှီနိင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်လို့ မရပါ။ အမျိုးသားရေး ယျဉ်ကျေးမှုတွေဟာ ခေတ်မှီန်ိင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်လို့ မရမှန် ဂျပန် တွေက ၁၈၅၀ ၀န်ကျင်ကတည်းက ၊ ထိုင်းတွေက ၁၉ ၀၀ ကုန်ကတည်းက သိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ မြန်မာ လူငယ်တွေနုိုးထ ကြ ပါ လို့ တိုက်တွန်း လိုပါတယ်။
ကိုမိုးသီး……ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက အပြောင်းအလဲလုပ်နေတာတော့မှန်ပါတယ်။ ခင်ဗျားထင်သလိုခေတ်မှီနိင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။
စစ်တပ်က ၂၅% ဘာ့ကြောင့်ယူထားသလဲ? အဖြေ(၁) ဦးသန်းရွှေက စစ်တပ်ကိုသူချုပ်ကိုင် နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်မူ့ပိုနေခြင်း၊ပြီးတော့ အခုအစိုးရအဖွဲ့ဝင် အားလုံးဟာ သူချုပ်ကိုင် နိုင်တဲ့သူတွေချည်းပါ။ စစ်တပ်က ၂၅% ယူထားခြင်းကိုက သူ့မိသားစုအတွက်”ကာဘာ”ယူထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်
အဖြေ(၂) ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေဟာ ဘယ်သူ့အတွက်ရေးဆွဲထားတာလဲ၊ ရှင်းပါတယ် သူ့အတွက်ပါပဲ။
စစ်တပ်ရဲ့နီးနီးနားနား "အတိတ်" ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်။ ဦးခင်ညွန့်၊ဦးတင်ဦး လက်ထက်ပြန်ကြည့်ပါ၊ ဆွေမျိုးပတ်လယ်တော်စပ်ကျတာတွေ။ပြီးတော့ တစ်အိမ် မှာစစ်သားတစ်ယောက်ရှိရေးစီမံကိန်းကြီးကိုလည်း ပီပြင်စွာ လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ။ ။ဗိုဟ်လောင်းတွေ၊စစ်ဆရာဝန်တွေ၊စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေ၊နပ်(စ်)တွေ၊ အို..အများကြီး…)
တစ်တိုင်းပြည်လုံး သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရင် စစ်သားနဲ့အရပ်သား”အချိုး”ကို မြင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် စစ်တပ်ဟာ ပြည်သူ့သားသမီးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဦးသန်းရွှေရဲ့ တစ်ဦးတည်းပိုင် စစ်တပ်ပါ။ ဒါဟာဦးသန်းရွှေရဲ့ ပထမစီမံချက်ပါ၊ ဦးခင်ညွန့်ကိုမေးကြည့်ပါ၊ ဒါအမှန် ပါ။
အခုလက်ရှိအစိုးရဟာ ဘူဇွာလူတန်းစားကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ ဖြစ်လာတဲ့ အစိုးရသက်သက်ပါ။
ဒါဟာဦးသန်းရွှေရဲ့ ဒုတိယစီမံချက်ပါ။ ပထမဆုံးအကျိုးအရှိဆုံး လူဟာ သူပါပဲ။ နိုင်ငံခြားကငွေစာရင်းတွေအတွက်စိတ်ပူစရာမရှိတော့ပါဘူး။ သူ့အမျိုးတွေလွတ်လပ်စွာနိုင်ငံရပ်ခြားကို သွားလာနိုင်ပါပြီ။ ပတ်(စ)ပို့ အမျိုးမျိုး ကိုင်ထားပြီးသားပါ။
ဦးသန်းရွှေဟာ သူ့ကိုဒီတစ်ခါ ဆန့်ကျင်မဲ့သူဟာ ပညာတတ်၊ ပိုက်စံချမ်းသာတဲ့ ဘူဇွာလို့ခေါ်တဲ့ လူလတ်တန်းစားဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်လောက်ကထဲက ကြိုတွက်ပြီးသားပါ။(ကျုပ်တို့လည်း P.S မှာသင်ဘူးပြီးသားပါ။) ၈၈တုန်း က ကျောင်းသားတွေကို နှိပ်ကွပ်ပြီးပြီ။ ၂၀၀၇ မှာ ဘုန်းကြီးတွေကို နှိပ်ကွပ်ပြီးပြီ။ ဒီကြားထဲ ကုလား၊ဗမာ အထိကရုန်းဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုး ကြိုးစားခဲ့သေးတယ်၊ လုပ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။
ွှTaxi တွေ English no ပါတယ်။ ကားဘေးနှစ်ဘက်မှာ။ စောက်ရှက်ကွဲနေဦးမယ်။ လျှောက်ရေးမနေနဲ့။ ရန်ကုန် ကော ရောက်ဘူးလား။
လီးဖြစ်လားကွာ မင်း အမြဲ ဘဲ မကောင်းပြောနေတာ။။ ကိုယ်ဖြင့်စောက်ဖြစ် ရှိအောင်မလုပ်နိုင်ဘဲ
နေဝင်းလက်ထက်ကစပြီး တောနယ်က မြန်မာနိုင်ငံသား
အများစုက abcd နဲ့ 1234 တောင်မသိကြ တော့ဘူးဗျ။
ခင်ဗျားပြောတာ ဒီတခုတော့ မှန်တယ်..ပြောင်းသင့်တယ်
ဘာပဲပြောပြော ပဲပြုတ်ကြိုက်တာကို အပြစ်မပြောပါဘူး ခေါင်းပေါင်းကြီးကိုကျနော် ၁၀ တန်းကျောင်းသားဘဝကတည်းက မကြိုက်ဘူး တက္ကသိုလ် မသွားခင် အမေကပြောတယ် တက္ကသိုလ်မှာ အရောင်စုံတယ် လွတ်လပ်တယ်တဲ့ ၁၁ နှစ်ကျော် ဝတ်လာတဲ့ အစိမ်းအဖြူကို ချွတ်ပြီး ကြိုက်တာဝတ်လို့ရတာ ပျော်တယ်ပြာ ကျနော့ စိတ်က လွတ်လပ်စွာတွေခေါ်(Philo ) ပြီးနေခြင်တယ် အများကိုလည်း လွတ်လပ်စေချင်တယ် သတိ သိပ်ကိုလွတ်လပ်ချင်တဲ့သူဟာ စည်းကမ်းရှိဘို့ လိုပါတယ် ဥပမာ ကို့ကြောင့်ဆိုတဲ့ အပြစ်ကို ရှောင်စေချင်ပါတယ်
19 May 2012 at 06:11
မင်းဘာလို့ အသေးအမွားလေးတွေ လျှောက်ပြောနေတာလဲ။ ဘေးမှာထိုင်ပြီး ဘုပြောဘို့လောက်ပဲ သိတဲ့ကောင်။
တခြား site က copy ကူးတယ်။ ရေး တော့လည်းေxာက်တလွဲတွေ။
19 May 2012 at 06:17